Midhahooda, Worldwide Church of God Switzerland (WKG)
Ugu yaraan kama fikirin geedaha. Si kastaba ha noqotee, waxaan fiiro gaar ah u siinnaa markay si gaar ah u weyn yihiin ama ay dabayluhu kor u ridayaan. Waxaan ogaan karnaa haddii mid ka buuxo midhihiisa ama midhihiina ay dhulka jiifaan. Inteena ugu badan ayaa go'aamin kara nooca midhaha oo sidaasna lagu gartaa nooca geedka.
Masiixu markuu yidhi waxaan garan karnaa geed midhihiisa ka mid ah, wuxuu adeegsaday tusaale aan wada fahmi karno. Xitaa haddii aanan weligaa dhir geedo midho leh ah, waan naqaanaa midhihiisa.Waxaan cunnaa cuntooyinkan maalin kasta. Haddii si sax ah loo siiyo ciid wanaagsan, biyo wanaagsan iyo bacrimiye ku filan oo ay jiraan duruufaha koritaanka saxda ah ayaa jira, geedo qaarkood ayaa midho dhali doona.
Laakiin wuxuu sidoo kale sheegay in dadka lagu garan karo midhihiisa. Ma u malaynayn inaan sidnay tufaax jirkeena ka goysnaa oo leh xaalado koritaan oo sax ah. Laakiin waxaan soo saari karnaa miro ruuxi ah oo soconaya sida ku xusan John 15,16.
Muxuu ula jeeday miraha noocee ah ayaa haray? Luukos 6, Ciise waqti ayuu la qaatay xertiisii ​​si uu ugala hadlo abaalmarinta dabeecadaha qaarkood (eeg sidoo kale Matayos 5). Ka dib aayadda 43aad wuxuu sheegayaa in geed wanaagsan uusan soo bixin karin midho xun sida geed xun uusan midho wanaagsan dhalan karin. Aayadda 45aad wuxuu sheegayaa in tani sidoo kale ay khusayso dadka: "Ninka wanaagsan wuxuu wax wanaagsan kaga soo bixiyaa khasnadda wanaagsan ee qalbigiisa, kan sharka lihina wuxuu ka soo bixiyaa maalka xun oo qalbigiisa. Taasi waa waxa afku ka hadlayo. »
Rooma 7,4 wuxuu noo sheegayaa sida ay suurta gal u tahay in la keeno camal wanaagsan: «Sidaas oo kale, walaalayaalow, sharcigu waa laydinku laayay iskutallaabta dusheeda (iskutallaabta ha lagu lafo Masiix) awood uma leh inaad adigu mid noqotaan waxaa leh kuwa kale, taasu waa kii kuwii dhintay laga sara kiciyey si aannu Ilaah midho ugu soo bixinno camal wanaagsan.
Uma malaynayo in Ilaah janno jannada ka buuxo miro la qalajiyey ama la sii diyaariyey. Laakiin si kastaba ha noqotee camalkeenna wanaagsan, ereyada noocaan ah ee aan dhahno, iyo koobabka biyo ah ee kuwa harraadku u leeyihiin waxay leeyihiin saamayn waara oo ku saabsan kuwa kale iyo annagaba. Markaynu dhammaanteen la xisaabtami doono isaga (Cibraaniyada 4,13).
Ugu dambeyntiina, soo saaridda miro joogto ah waa gacanta kale ee iskutallaabta aqoonsiga. Maaddaama uu Eebbe u doortay shakhsiyaad anaga nala mid ah kana abuuray abuur cusub oo nimcadiisa hoos u dhigay, waxaan ku muujineynaa nolosha Masiixa ee dhulka kuna midho u dhali doono. Waa mid joogto ah sababta oo ah ma aha wax jir aha - ma dumin karo ama lama burburin karo. Midhahanu waa natiijada nolosha ee hoos timaadda Ilaah, jacayl buuxana u qaba isaga iyo dadka kale ee aadanaha ah. Aynu had iyo jeer midho soo kordhno weligiis weligiis!